हलकारो विशेष – Page2– Halkaro
सत्यनिरुपण र वेपत्ता आयोगः प्रगती शून्य म्याद थपिरहँदै सरकार
काठमाडौँ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटना छानविन गर्न गठित दुई आयोगहरुको प्रगती शून्य भएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद पुनः एक वर्षका लागि थपेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो । […]
चितवन । सोमबार गृहजिल्ला अाइपुगेका माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देवघाट पुगे । अाइतबार बाट देवघाटको गलेश्वर अाश्रममा सुरू भएको विराट ज्ञानमहायज्ञको अवलोकन तथा अाश्रमले निर्माण गर्न लागेको विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्दै प्रचण्डले विगतलार्इ कोट्याउन थाले । सानोमा ब्रतबन्ध नहुँदै देवघाट पुगेको, अाफ्ना बाअामासँग देवघाटमा घुमेको, ब्रतबन्ध पछि देवघाटमा पानीमा डुबुल्की मारेको देखि अाँफ्ना […]
दिल्लीको त्यो सन्देश र यो सन्देश
प्रकाशित मिति : २०७४, २० माघ शनिबार February 5, 2018
३ असोज २०७२ मा नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने तयारी गर्दै थियो । नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसी समुदायलाई समेट्नुपर्ने बताउँदै आएको भारतले अकस्मात् आफ्नो विशेष दूत काठमाडौं पठायो । दिल्लीले स्पष्ट रूपमा तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरलाई नेपाल पठाएर संविधान जारी नगर्न दबाब दिएको थियो । त्यतिबेला नेपालले संविधान जारी गरेरै छाड्यो । […]
प्रकाशित मिति : २०७४, १७ माघ बुधबार February 2, 2018
पछिल्लो तीन महीनामा भरतपुर अस्पतालमा २८ वर्ष मुनिका पाँच सुत्केरीको ज्यान गएको छ । ‘विभागहरू बीच आपसी समन्वयको अभावमा उनीहरूको मृत्यु भएको’ अस्पतालको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेको सो गोप्य प्रतिवेदनको खुलासा । चितवन । २०७४ असोज, कात्तिक र मंसीरमा भरतपुर अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आएका पाँच महिलाको ज्यान गयो । उनीहरू २१ […]
काठमाडौं । बाम गठबन्धनबाट प्रदेश नम्बर ५ को मुख्य मन्त्रीमा शंकर पोखरेल उम्मेदवार हुने भएका छन् । एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने निर्णय गरेपछि पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो । एमाले र माअोवादी केन्द्रबीच प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री एमालेले लिन सहमिति भएको छ । सोही अाधारमा पनि बाम […]
सन्दीपका लागि अर्को संयोगः अष्ट्रेलियन पूर्वकप्तान पोन्टिङको प्रशीक्षण र म्याक्सवेलसँग खेल
प्रकाशित मिति : २०७४, १४ माघ आईतवार
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटका लागि दिल्ली डेयर डेबिल्सले नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलार्इ किनेको छ । योसँगै अब उनी विश्वका उत्कृष्ट क्रिकेटरसँग खेल्न पाउने भएका छन् । अष्ट्रेलियन खेलाडी माइकल क्लार्कका प्रिय सन्दीपका लागि दिल्लीमा अनुबन्धित हुनु अर्को संयोग बनेको छ । अब उनी अष्ट्रेलियन पूर्व क्रिकेटर रिकी पोन्टिङको प्रशीक्षणमा अाफ्नो खेलकौशल […]
जानी राखौँ मतदान कसरी गर्ने ?
प्रकाशित मिति : २०७४, ९ मंसिर शनिबार December 8, 2017
काठमाडौँ । अाइतबार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा अन्तगर्त पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैँ छ । ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा सदस्य र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने गरेकमा प्रत्येक मतदाताले तीन वटा मतत्रपत्रमा मत छुट्टाछुट्टै मतपेटिकामा खसाल्नु पर्ने छ । ३ मतपत्रमा प्रत्येक मतदाताले ४ वटा मत दिन पाउने छन् । प्रस्तुत छ मतदान गर्ने […]
पुत्रवियोगबाटै प्रचण्डले भनेः सबै नेपाली युवायुवतीमा प्रकाश देख्छु
प्रकाशित मिति : २०७४, ७ मंसिर बिहीबार November 27, 2017
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब सबै नेपाली युवायुवती अाँफूहरूका छोराछोरी भएको बताएका छन् । आइतबार निधन भएका पुत्र प्रकाश दाहालको निधनमा प्राप्त समवेदनाले आफ्नो लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रकाश अब छैनन् तर देशका हरेक युवायुवतीमा हामीले प्रकाश देखेका छौँ योदेशका सबै युवायुती हाम्रा छोरा प्रकाश […]
अनल गौतमको ‘लभ एट पच्चिस’को लोर्कापण
प्रकाशित मिति : २०७४, २९ कार्तिक बुधबार
साहित्य लेखनमा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका अनल गौतमको उपन्यास ‘लभ एट पच्चिस’ बुधबार राजधानीमा लोर्कापण भएको छ । उक्त उपन्यासको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकूलपति बिष्णुबिभु घिमिरे, प्रा.डा.कृष्ण दाहाल, कलाकार एवं समाजसेवी सिताराम कट्टेलले संयुक्त रुपमा लोर्कापण गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकूलपति बिष्णुबिभु घिमिरेले उपन्यास अत्यन्त सरल एवं उत्कृष्ठ रहेको र पाठकको मन सजिलै […]
गोरखा २ हेभिवेट भिडन्तः कसको स्वर गुञ्जिएला संघीय संसदमा ?
प्रकाशित मिति : २०७४, ४ कार्तिक शनिबार October 28, 2017
काठमाडौँ । २ वटा क्षेत्र रहेको गोरखामा यसपटक निर्वाचनको बेग्लै रौनक छाएको छ । मंसिर १० को निर्वाचनमा यहाँ हुने हेभिवेट भिडन्तको चर्चा चुलिएको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदै गर्दा नेकपा एमालेको समर्थनमा माअोवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्ने भएपछि सबैको ध्यान गोरखा […]